▷ Ihe niile gbasara laptọọpụ Xiaomi, ha nwere kiiboodu Spanish?
Na China, a mụrụ nnukwu nro maka Apple na ụdị ndị ọzọ, dị ka nnukwu teknụzụ Xiaomi anaghị akwụsị itolite. Ogo na ọnụahịa nke ngwaahịa ya bụ otu n'ime ike ya, ma ọ bụghị naanị ya. Ọ na-egosipụtakwa nhazi nke akụrụngwa ya na uru ndị ha gụnyere, yana teknụzụ kachasị ọhụrụ. Laptọọpụ ya, yana nke Huawei, bụ mkpughe ...
1 Xiaomi akwụkwọ ndetu nso
1.4 Xiaomi Redmi G Gaming
2 Kedu ihe kpatara na anaghị ere laptọọpụ Xiaomi na Spain?
3 Laptọọpụ Xiaomi ọ nwere ahụigodo Spanish? Enwere ike idozi ya?
4 Ọ bara uru ịzụta laptọọpụ Xiaomi?
Xiaomi akwụkwọ ndetu nso
N'ime akara Xiaomi ị nwere ike ịchọta usoro dị iche iche emebere ya na mkpa nke otu onye ọrụ n'uche:
Ọ bụ laptọọpụ e mere iji nye ọmarịcha imewe yana ngwaike dị ike nke nwere Intel i5 na i7 / AMD Ryzen 5 ma ọ bụ 7 processors, raara onwe ya nye na agbakwunyere NVIDIA GeForce MX GPU na Intel Iris Xe / AMD Radeon n'otu n'otu, yana ihuenyo dị. na 13, 14 na 16 ”(FullHD IPS ruo 2.5K mkpebi na njupụta Super Retina panel).
Nnwere onwe bụ ihe dịka awa 12 n'okwu a. Ọ nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ maka Apple Macbook Pro na ọnụ ala dị ala yana sistemụ arụmọrụ Windows.
Ọ bụ akwụkwọ ultrabook, nwere profaịlụ dị gịrịgịrị ma hazie ya iji nye nnukwu ngagharị na nnwere onwe ruo awa 13. Ọ na-agụnye ngwaike siri ike, yana Intel i5 ma ọ bụ i7 ibe, ruo 16 GB nke RAM, yana eserese Intel Iris Xe na NVIDIA GeForce MX raara onwe ya nye. Enwere ike nweta ya na SSD nke ruru 512 GB yana ihe ngosi 15.6 ”Super Retina OLED. Otu n'ime ihe kachasị mma maka ndị na-achọ otu ndị nwere oke nha anya.
Ọ bụ usoro ọhụrụ gbadoro ụkwụ na Notebook Pro, mana nke ahụ na-abawanye ma e jiri ya tụnyere nwanne ya nwoke nke obere. Ọ bụ kọmpụta dị ọnụ ala karịa, mana ngwaike ya gụnyere Intel i5 ma ọ bụ i7 kachasị elu, eserese NVIDIA GeForce RTX 3000 Series Ti raara onwe ya nye, ruo 32 GB nke RAM, SSD ruo 1 TB, nnwere onwe ruo 11.5 awa, na Super OLED ihuenyo. Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ultrabooks kacha mma na ahịa.
Ọ bụ usoro dabere na Redmi, mana gbadoro ụkwụ maka ndị egwuregwu. Akwụkwọ ndetu a nwere ndị nrụpụta Intel i5 / i7 kachasị ike, gbakwunyere 16GB nke RAM, yana eserese raara onwe ya nye site na NVIDIA GeForce GTX 1000-Series. Ọ gụnyere ihuenyo 16.1 ”, mkpebi FullHD na 60 ruo 144Hz dabere na ụdị ahụ.
Ọ bụ ụdị ọzọ maka ịgba chaa chaa bịarutere Spain maka ndị egwuregwu na-achọghị ka ndị na-egwu egwuregwu na-ahọrọ akụrụngwa dị ọnụ ala karịa. Ihe nlereanya a gụnyekwara ndị nrụpụta Intel i5 na i7 siri ike, RAM n'etiti 8 na 16 GB, 512 ma ọ bụ 1TB SSD, awa 6.5 nke nnwere onwe, yana ihuenyo 15.6 ”FullHD. A ga-arara ndịna-emeputa NVIDIA, yana ọtụtụ ụdị ịhọrọ site na: GeForce GTX1660 Ti, RTX2060, GTX1060 niile 6GB VRAM, ma ọ bụ 1050GB GTX4 Ti.
Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, usoro isiokwu a ga-abụrịrị asọmpi na Apple's Macbook Air. Ọ bụghị naanị na ọ na-ele anya na imewe na ngagharị, mana ọ na-ezobe ọnụ ahịa dị egwu ma e jiri ya tụnyere ndị otu Cupertino.
Ị nwere ike ịhụ ya na ihuenyo 13.3 ” yana nnwere onwe nke awa 8. Akụrụngwa gị nwere ike ịgụnye ndị nrụpụta Intel i3, i5 ma ọ bụ i7 ọhụrụ, ruo 8GB nke RAM, yana 2GB raara onwe ya nye NVIDIA GeForce MX Intel UHD + eserese agbakwunyere. Banyere nchekwa, ị nwere ike ịhọrọ SSD site na 128 ruo 512 GB.
Kedu ihe kpatara na anaghị ere laptọọpụ Xiaomi na Spain?
Laptọọpụ Xiaomi adịghị mfe ịchọta, n'agbanyeghị na ị nwere ike zụta ha n'ụlọ ahịa dị ka Amazon ma ọ bụ nke gị ụlọ ahịa gọọmentị nke Xiaomi Spain. Ihe kpatara na mgbe ụfọdụ anaghị ere ha ebe a bụ maka nhazi igodo ha. Emebere otu ndị a n'okpuru ọkọlọtọ ANSI nke United States. Nke a ekwesịghị ịbụ nsogbu, ebe ọ bụ na ha agbakwunyela Ñ.
N'aka nke ọzọ, ngwá ọrụ ndị a ga-esi kpọmkwem site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na China, na oge atụmatụ ịbịarute Spain na-abụkarị n'etiti 3 na 7 ụbọchị. Ogologo oge dị ogologo karịa ọtụtụ ụdị ndị ọzọ sitere na ụdị ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọta ya na ụlọ ahịa nwere ngwaahịa zuru oke, nchere nwere ike ịdị ka ụdị ọ bụla ọzọ ...
Laptọọpụ Xiaomi ọ nwere ahụigodo Spanish? Enwere ike idozi ya?
Ha enweghị ahụigodo Spanish n'ezie dịka m kwuru na mbụ, mana ha etinyela igodo Ñ dịka m kwuru. Nke a anaghị eme ha 100% Spanish kiiboodu, ma opekata mpe, ọ bụ nnukwu enyemaka, ọbụlagodi na nhazi ahụ dịtụ iche. Ma, ọ bụrụ na ị zụrụ ihe nlereanya na-adịghị ọbụna gụnyere Ñ, ma nwere English version ozugbo, ị nwekwara ike ịgbanwe ya. Nke a ekwesịghị ịbụ ihe mgbochi, dịka o nwere ike ịbụ gbanwee "layout" ma ọ bụ nhazi ahụigodo site na sistemụ arụmọrụ iji tọọ nke ahụ maka obodo ọ bụla, gụnyere Es_es (Spanish maka Spain) nwere ọkọlọtọ ISO.
Ka ị nwee ike ịhọrọ nhazi ziri ezi na sistemụ arụmọrụ Microsoft Windows 10, ị nwere ike soro usoro ndị a, ma ọ bụrụ na ahazighị ya dị ka ọkọlọtọ:
Site na Windows 10 gị gaa na Malite.
Wee tinye oge na ngalaba asụsụ.
Ihe na-esote bụ ịga na Asụsụ.
N'asụsụ ndị ahọpụtara ị na-ahọrọ asụsụ ịchọrọ maka ahụigodo gị.
Ugbu a bụ oge iji gaa na bọtịnụ Nhọrọ na-egosi.
Ozugbo ịbanye, họrọ Tinye kiiboodu wee họrọ asụsụ ịchọrọ.
Na Amazon e nwekwara akwụkwọ mmado ahụigodo na Spanish nke ị nwere ike iji gbanwee ụdị ọ bụla n'asụsụ ọzọ ka ọ bụrụ nke Spanish. Yabụ na ị gaghị enwe mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị kwesịrị ile anya iji pịnye ...
Ọ bara uru ịzụta laptọọpụ Xiaomi?
Nke bụ eziokwu bụ na ha dị ezigbo mma, na otu n'ime atụmatụ kachasị mma, na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya n'ọtụtụ ọnọdụ. Na, n'ezie, na ndị ọhụrụ na ngwaike na teknụzụ. Ya mere, na ụkpụrụ ha bụ a kediegwu ịzụta nhọrọ. Kama, mmachi na ebe ịchọta ngwa ndị a nwere ike iweghachi ụfọdụ ndị na-azụ ahịa azụ.
N'aka nke ozo, akwụkwọ ikike na ọrụ nka Ha nwekwara ike bụrụ ihe ịdọrọ ụfọdụ, ebe ọ bụ na ị si China ị nwere ya dị mgbagwoju anya karị, ọ bụ ezie na nke nta nke nta Xiaomi na-emeziwanye akụrụngwa ya na mba ndị ọzọ. N'okwu a, ugbu a ọ nwere ike ịka mma ịkụ nzọ na ụzọ ndị ọzọ na-ere site na Spain ma nwee ọrụ ka mma, dị ka Chinese Huawei ma ọ bụ Lenovo ...
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Xiaomi laptọọpụ